Gemini Woman - toetra Zodiac sy toetranao amin'ny fitiavana, fampifanarahana ary fiainana! - Famantarana Zodiac
Ilay vehivavy Gemini ny toetrany sy ny toetrany amin'ny fitiavana, fampifanarahana ary fiainana
Toa ilay vehivavy nianjerao sy haingana be ve izany? Avy eo dia ratsy ho an'ny Gemini ianao, ary afaka mandeha irery ianao… mety tsara izany mazava ho azy! Ny Vehivavy Gemini dia manana famantarana zodiaka izay maneho ny maha-roa. Izy io dia hevitra iray maneho ny hoe iza io vehivavy tsara tarehy io momba ny toetra. Izy dia sady mamirapiratra no sahy, wild ary voafehy, ary afaka mifamadika avy amin'ny iray ka hatrany amin'ny hafa mahery izy ao anatin'ny iray millisecond na latsaka! Ka ny Gemini Gal anao dia afaka manova ny eritreriny, ny drafiny na ny sainy!
Noho izany, vonona ve ianao amin'ny vehivavy iray te hahafanta-javatra sy mahatsikaiky? Hoatran'ny hoe mampiaraka vehivavy roa samy hafa ianao, indrindra rehefa miaraka amina Gemini mahafinaritra sy manan-tsaina ianao!
Ilay Vehivavy Gemini
Ny toetrany sy ny toetrany amin'ny fitiavana, fampifanarahana ary fiainana
Aleo atrehana; Tamin'ny fotoana voalohany nihaonanao taminy tamin'ny toetrany feno hafaliana sy mahafaly ary ny fanomezany ho an'ny teny dia nilatsaka ho azy ianao. Manana fahendrena mihoatra ny taonany izy, izay toa mitaky fanajana. Raha atao indray mipi-maso dia toy ny zaza milalao bontolo izy. Ny toetrany mihetsiketsika dia mahatonga azy handinika an'izao tontolo izao amin'ny alàlan'ny solomaso gaga sy maso liana. Eto izy dia miaina mifanaraka amin'ny teny filamatra hoe: 'Mieritreritra aho.'
Gemini Vehivavy Lisitry ny Atiny
Ahoana ny fomba hisarihana vehivavy Gemini
Mampiaraka vehivavy Gemini
Ny planeta Mercury dia mifehy ny vehivavy Gemini, ary io vatana manandro io dia mifanitsy amin'ireo andriamanitra lahy hafa manerana ny kolotsaina sy ny pantheons maro. Any Egyptie taloha, ny planeta dia mifanitsy amin'ny andriamanitra syncretic Hermes Trismegistus, izay fitambaran'ny andriamanitra grika Hermes sy Thoth an'ny Egypte Thoth. Ilay teny hoe ' Trismegistus 'midika hoe, intelo tsara. Mety ho hitanao ihany koa ny fanondroana andriamanitra toy ny Mercury telo lehibe indrindra , Mercury na Enoka mihitsy aza: Ny Hermes rehetra, andriamanitra mpitondra hafatra, mpiaro ny mpivarotra, ary ilay mifehy ny fetra rehetra.
Jery ​​iray hijerena ilay kisary mijoro ho an'ny Sun Sign of Gemini ary mazava indray miaraka fa ny Gemini Woman dia olona iray izay haneho mazava tsara ny fetrany manokana. Saingy, izy koa dia hanosika ny fetra hahatratra ny fetra farany hahitana ny halavany. Ny toetra mampiavaka ny vehivavy Gemini dia ahitam-bokatra miavaka, ny fahaizana mifanaraka ary koa ny fanovana.
Izy dia iray izay tompon'ny serasera: Izay lehilahy mihaona aminy dia azo inoana fa ho talanjona amin'ny fahaizany miteny mahatalanjona. Ny faritra fanampiny izay nitaoman'ny Mercury ny fitaomany dia ny vavahady, ny dia, ny mpivarotra, ny orinasa, ny te hahafanta-javatra, ny siansa ary ny fomba fisainan'ny Gemini gal anao. Ny Mercury dia mitaona ny saina ary mampita fahendrena lalina sy fisainana filozofika amin'ireo izay mitaona izany.
Gemini Vehivavy am-pitiavana sy ao am-pandriana
(Venus amin'ny Gemini)
Raha ny fitiavana sy ny firaisana no resahina dia ny vehivavy Gemini no tandindon'ny dikan'ny hoe mandeha ho azy. Tiany ny traikefa nahafinaritra sy ny tantaram-pitiavana mifangaro rehetra ho iray, ary raha tsy misy taratra mivantana na karazana spontaneity ny fifandraisana iray dia hanidina ny koop.
Ireo mpiara-miasa manana vady dia hahita fifandraisana amin'ny vehivavy Gemini dia hiafara amin'ny faharavana: tsy azony tompony, voasambotra, manana ary tsy mahay mampiofana izy. Tsy maintsy ekenao izy, ny namany, ny fianakaviany, ary izay fifanarahana fonosana omeny koa. Hevero ho toy ny farango sy tsipika ary sinker ity fifandraisana ity! Rehefa lavo ho an'ny vehivavy Gemini ianao dia tianao ny REHETRA momba azy, na dia izay mifandray akaiky aminy aza rehefa mahita ireo zavatra ireo ho toy ny fanitarana ny tenany izy!
Ny vehivavy Gemini dia tsy iray amin'ny fijanonana amin'ny toerana iray lava ka raha miara-mipetraka aminao ianao dia manaova drafitra hamindra. BETSAKA. Ny fitsangatsanganana dia hameno ny filàny amin'ny airiness sy ny sidina, ary ny fandosirana kely amin'ny zava-misy dia hahavoky ny faniriany hanao traikefa mitohy. Raha tsy matoky tena ianao amin'ny lafiny rehetra, ario lavitra izao ny fisalasalana. Ny tsy fandriam-pahalemana dia olana miandry fotsiny ny hitranga, latsaka amin'ny iray amin'ireo vehivavy ara-tsosialy indrindra amin'ny zodiak rehetra ianao.
Tsy afaka saro-piaro ianao isaky ny mahita azy mifanerasera amin'ny olon-kafa… izany no paika fanaovana hadalana azo antoka! Aza manahy raha miverina ny fitiavanao ny vadinao Gemini dia izy irery ihany. Tsy mivadika izy. Rehefa hitan'ilay Vehivavy Gemini ilay notadiaviny nandritra ny androm-piainany iray manontolo: Izay afaka mahasarika ny sainy, misambotra ny fony, ary mameno fifaliana ny fanahiny, izy irery no manana maso ho an'io olona io.
Ny toetrany, ny toetrany, ny toetrany
Fiainana feno tanteraka: Izany no maha-vavy ny zaza teraka teo ambanin'ny marika Gemini! Hoentiny miaraka aminao amin'ny dia sy fitsangatsanganana miaraka aminy ianao, omena anao izany fa nahazo ny tsinay sy tanjaka hiaretana miaraka aminy ianao! Amin'ny voalohany, mety manana olana ianao amin'ny fitazonana ilay vehivavy Gemini. Tsy maharitra ela loatra izy manao zavatra iray na miaina zavatra hafa.
Fohy ny fiainana, vetivety ihany ny fotoana, ary ny vehivavy Gemini dia miaina fiainana miaraka amn'ny fandondoman'ny famantaranandro tsy tapaka eo an-dohany. Azonao atao ny mijery azy ary mahita azy manao toy ny lolo. Toy ny hoe mifindra voninkazo mahafinaritra iray mankany amin'ny iray hafa izy. Ny hafa izay tsy mijery ny masom-pitiavana miloko raozy dia mety hahita azy bebe kokoa toa ilay bitro fotsy malaky, tsy manam-paharetana ary mihazakazaka ao amin'ny Alice Carroll's Alice in Wonderland! Na inona na inona solomaso fandinihanao hitanao amin'ny vehivavy Gemini, ny zavatra manamarika anao indrindra dia ny fahalianany tsy mitsahatra: Ity hevitra ity dia nalaina tao amin'ny teny filamatra hoe: 'METY aho.'
Miresaha sy miresaka ary miresaha bebe kokoa… hahazo resaka matotra amin'ity vehivavy mahay mandaha-teny ity ianao. Tiany ny mifanerasera amin'ny hafa, ary handray am-pifaliana izy amin'ny resaka rehetra. Raha somary tsy mahay mandanjalanja amin'ny heriny izy, dia mety hiala amin'ny resaka.
Mety hiteny koa izy toa ny miresaka aminao fa tsy aminao. Ahoana no hahalalanao ny fahasamihafana? Faly tokoa ianao nanontany hoe: Ho fantatrao rehefa toa fomba iray amin'ny hafa ny resaka na ny teniny sy ny eritreriny toa ny zavatra tokana mitondra lanja na manafatra. Ny vehivavy Gemini dia olona tia miaina izay rehetra atolotry ny fiainana. Ny teny filamatr'ilay Vehivavy Gemini, 'Heveriko,' dia manana azy ireo hikatsaka fahalalana tsy tapaka, na eo amin'ny sehatry ny fampianarana izany na eo amin'ny sehatry ny fiainana.
Faly izy mahazo fahalalana, na dia any am-pianarana mandondona mafy aza. Na izany na tsy izany, rehefa miresaka amin'ny Gemini Woman ianao dia 'hiteny ny fiteninao izy.' Raha atao teny hafa, dia hataony mahazo aina ianao rehefa miresaka aminy. Fa maninona Mpanjakavavin'ny mpiresaka izy!
Ny sisa ataonao dia mamela azy hitarika ary lasa ianao ary mihazakazaka. Mbola tsara kokoa aza, tsy ho lany ny zavatra mahaliana rehetra horesahina ianao satria ny vehivavy Gemini dia manana saina mahatonga azy ireo ho mpilalao lalao mety tahaka ny Trivial Pursuit. Miaraka amin'ny sombin'ny fahalalana mahatalanjona, mitazona ny vehivavy Gemini, azo antoka fa hanao mpampianatra na mpanabe miavaka izy.
Izy dia boribory tsara, tony ary kanto amin'ny lafiny iray amin'ny faran'izay henjana, ny tovovavy Gemini Woman mifanohitra amin'izany dia nanjary nankaleo azy tamin'ny fomba quo ho mora. Rehefa misedra fahasosorana, ny vehivavy Gemini dia mety hahita faharatsiana kely fotsiny, ary mety hiaina fanahiana, fitaintainanana, na hanjary ho somary esorina amin'ny fihenjanana mihitsy aza.
Raha mahavita mifehy ny lafiny alokalony ny vavy Gemini, dia mety hamorona famoronana izy. Mety haneho fironana ara-javakanto matotra mihitsy aza izy: ny famporisihana ireo toetra ireo dia zava-dehibe satria fomba iray hizaha tena ny vehivavy Gemini io, hanitatra ny faravodilanitra, ary hifehezana ny fihetseham-pony mitebiteby sy mampihetsi-po, amin'ny alàlan'ny ezaka famoronana dia afaka miatrika fihetsem-po ao anaty izy. tontolo azo antoka, tsy eo ny zavatra mety hahatonga azy hanao ratsy.
Ao an-trano, ny Gemini Woman dia mety hanova ny fomba anatiny maoderina miaraka amina lohahevitra, loko ary fanaka vaovao. Ny tsirony amin'ny haingon-trano dia tsy miankina amin'ny fanovana vanim-potoana na isan-taona. Raha ny tokony ho izy, isaky ny manafika ny volony dia mamaritra ny lohahevitra haingo. Miaraka amin'ny fitiavany ny fiainana, ny lokony ary ny fionony, dia hankafy ny fahafaha-manao miavaka rehetra momba ny endrika anatiny izy.
Ataony azo antoka fa misy toerana kely famakiana ho an'ireo boky tiany indrindra, fa ho azony antoka koa fa ny tokantrano dia tontolo iainana mandray olona sy fianakaviana. Ny toetra ara-tsosialy hatrizay dia mampanantena antsika ireo fisakafoanana mahafinaritra, fety ary fotoana mety hifaneraserana isak'izay ao an-trano izay Gemini no lohan'ny vehivavy.
Ny vehivavy Gemini dia tia miresaka momba ny lafiny rehetra ao an-trano. Hiresaka momba ny fomba fampandehanana azy ireo izy ireo, amin'ny fahatsapana fa ny kabary malalaka dia manampy amin'ny tombony lehibe kokoa ho an'ireo rehetra mipetraka ambanin'ny tafo iray. Raha lasa be resaka loatra izy, io dia famantarana iray izay tsapany fa tsy miraharaha azy ary mitady olona hanaiky ny feony ho manafatrafatra izy. Aza hadino ny mampifanaraka ny zavatra lazainy rehefa miteny izy. Ity dia vehivavy izay tsy ho raharahina ela loatra, farafaharatsiny tsy misy vokany.
Miaraka amin'ny filàn'izy ireo tsy tapaka resaka na fifampiresahana mivantana, tsy mahagaga raha ny fitondrana anatomika an'ny Gemini dia ahitana ny havokavoka, ny bronchi, ny trachea, ny fihary thymus ary ny fisefoana. Ny famantarana koa dia mifehy ny humerus (taolana ambony sandry), scapula (soroka soroka), ary ny tadim-peo. Ity famantarana roa sosona ity dia mora voan'ny aretina mihoatra ny iray, noho izany dia avo ny fiarahan'ny mararin'ny vehivavy Gemini. Ny vehivavy Gemini dia mety hijaly amin'ny toetr'andro, ary misy olana ara-pahasalamana misy eo amin'ny tenda, miaina, ary amin'ny tranga sasany dia mipoitra ny olana ara-psikolojika mifandraika amin'ny tebiteby, tsy fitoniana, na fitaintainanana.
Mikasika ny safidin'ny asa, ny Gemini Woman dia mety hiady mafy amin'ny asany iray monja. Fa kosa, mety manova asa mandra-pahatsapany fa miasa amina asa tiany izy: Asa iray ahafahany mifoha maraina ary tsy mila misintona ny vodiny hiala eo am-pandriana ary manery ny tenany handeha isan'andro. Eto ny fisakaizana, fahaiza-manao, faharanitan-tsaina ary fahaiza-mampifanaraka dia manamora ny fiovan'ny Gemini Woman amin'ny asa iray mankany amin'ny manaraka.
Miaraka amin'ny fahaizany lehibe amin'ny serasera, dia toa mifantoka amin'io lafiny io ny asany. Ny safidy amin'ny asa sasany dia mety ahitana ny fiasana amin'ny serivisy an-tariby, ny fahatongavana ho mpampianatra na mpanabe, mpisolovava, dokotera, mpanolotsaina ary ny tombontsoany mihoa-pampana dia mety hahaliana azy amin'ny toe-javatra misy fiatraikany amin'ny saina, toy ny psikolojia na psychiatrie. Ny vehivavy Gemini dia tsara amin'ny tanany ihany koa, ary manao mpanao hosodoko, mpanao sary sokitra, quilter, tatatra, mpamorona sary, mpamorona atitany, sy ny toy izany izy ireo.
Mandritra izany fotoana izany, ny fanandramany ilay vaovao, manaitaitra, ary tsy mahazatra dia mety hahaliana azy ireo amin'ny zavakanton'ny fiheverana diso sy ny fametavetana ody atao tanana. Ary farany, ny fanovana ny talenta mifampiresaka aminy ho hira sy mozika dia mahatonga azy ireo ho mpihira, poety, mpamoron-kira ary mpitendry mozika.
Raha mitady ho manintona vehivavy Gemini ianao dia mila feno fientanam-po, malemy paika, mahay mandanjalanja ary mora mandeha. Ianao koa dia te-hitazona ny sainy amin'ny fampidirana fanovana tsy tapaka amin'ireo faritra mahazatra ao amin'ny fifandraisana. Ny vehivavy Gemini dia mankaleo haingana. Mila miaina fiovana mifanohitra amin'ny fikatsoana izy ireo: Toy ny hoe manintona azy ireo ny zava-drehetra mihetsika, mihetsika ary Miaina. Io hetsika io no mahatonga azy ireo hahatsapa ho velona indrindra. Io no tadiavin'izy ireo isaky ny toa mivoaka amin'ny tangent iray hafa izy ireo hikaroka fientanam-po, fahafinaretana ary vaovao.
Hamarino tsara fa tsy tafiditra ao anaty ratra mahazatra ianao, na mety handositra izy. Sarimihetsika daty iray, sakafo hariva hafa, zaridaina lohahevitra iray hafa, ary fitsangatsanganana an-dasy amin'ny fialan-tsasatra manaraka – ampifamadiho izany ary hitazomanao ho mpifamofo izy. Ny zavatra farany tianao hatao dia ny ho tonga vinavina: ny spontaneity dia mandeha lavitra amin'ny Gemini Woman.
Ampahafantaro azy fa tsara tarehy izy. Ankafizo tsy tapaka izy. Asehoy azy fa mahatsapa tsara ny fikarakarany ny tenany ianao: raha mifankatia miaraka aminao ianao dia mety manandrana mampiaiky volana anao izy, farafaharatsiny! Hihomehy izy rehefa milalao tsy tapaka koa! Oh, ary ny milalao mafy hahazoana izay matetika dia tsy maninona koa; Ho zava-baovao ianao, ary handray am-pifaliana ny fanenjehana hanenjika anao izy. Farany, aza adino ny mampihomehy azy matetika; ny fahatsapanao vazivazy no fanananao lehibe indrindra, indrindra miaraka amin'ity vehivavy mahay miresaka sy mampihomehy ity.
Ny resaka fifampiresahana, fifampiresahana ary filozofika na resaka mandresy lahatra no tena lohan'ny vehivavy Gemini. Ny fananana fianakaviana sy namana manodidina azy ary manatrika hetsika ara-tsosialy dia fialamboly mahafinaritra iray hafa ho an'ilay vehivavy teraka teo ambanin'io famantarana io. Ankafiziny ny fahaleovantenany, ny fahalalahany, ny fivezivezeny, ny famakiny ary ny fetra fanerena mandrakizay hahitany ny halehiben'ny vitany. Ilay vehivavy Gemini dia tia mihaika ny tenany ihany koa mba handroso lavitra noho ny teo aloha amin'izay ezaka rehetra ataony. Tiany ny olona marin-toetra, tso-po, mora mandeha ary rivo-piainana mampiroborobo ny fahalalahana, ny fisainana malalaka, ary ny fanekena ny toerana misy azy manokana.
Gemini Woman, na dia mora tratran'ny tafahoatra aza, dia tsy raharahainy ny mahita ny hafa mora tohina amin'ny karazana mahery fatra. Io dia rehefa mitady mpanelanelana amin'ny tontolo iainana izy. Ary rehefa mahatratra ny fifandanjana dia ao anatin'ny fifandraisana mandritra ny fotoana maharitra izy. Raha duplicitous, disingenous, na tsy tso-po ianao, ny Gemini Woman hendry indrindra dia hahita anao. Manaiky ny hafohy amin'ity fiainana ity izy. Fantany fa zava-dehibe ny maha-zava-dehibe ny tsy fandaniana izany amin'ireo olona mangidy izay mandà tsy hihoatra ny fameperana napetraky ny tenany manokana hikatsahana ny fahasambarana tadiavin'ny fony. Tsy tiany koa ny herisetra, ny lainga ary ny karazam-pifandraisana izay mandrahona ny hanafaka azy.
Lalao tsara indrindra ho an'ny vehivavy Gemini
Ny vehivavy Gemini dia mamorona finamanana haingana sy mora be: satria mora tohina amin'ny toe-po sy fisainana izy ireo, dia afaka miantso mpihaino maro kokoa izy ireo, ka ny namany voalohany dia toa lehibe kokoa noho ny ankamaroany. Tadidio fa ny namana noheverina ho olom-pantatra ary ireo noheverina ho tsara indrindra dia vondrona roa samy hafa ao an-tsain'ny vehivavy Gemini, izay haneho fifandraisana lalindalina kokoa amin'ireo namany akaiky azy indrindra.
inona no dikan'izany rehefa manonofy ny hanao fofombady ianao?
Amin'ny maha-zatovo azy dia mety toa mandehandeha na miovaova izy rehefa mizaha ireo fetra ary mahita hoe iza izy ary iza no tiany hahatongavana. Manan-tsaina, mpandinika izay nosedraina ary marina, manao mpianatra mahay izy ary mifanerasera tsara amin'ny ankamaroan'ny mpiray tampo na mpiara-mianatra / mitovy taona aminy, na dia mety hifandona amin'ny iray tampo aminy aza i Pisces na i Scorpio, izany rehetra izany dia mijanona eo akaikin'ny fianakaviany akaiky izy. mpikambana.
Raha te hijanona ho mpinamana amin'ny vehivavy Gemini ianao dia tsy maintsy ho marina, mahatoky ary marina. Tsy ho ela dia ho lasa tsy mendrika ho an'ny tena izy izy ary avy eo miroso amin'ny zavatra tsara kokoa. Tadidinao ilay fampitahana lolo? Ny fofon-drivotra iray ary ny lolo dia mandeha mba hahitana tontolo mahafinaritra sy azo antoka kokoa.
Famantarana zodiaka azo ovaina no mitondra azy, noho izany dia mahay mandanjalanja tsara izy, saingy raha tsy tena te-hanitsy izy. Oh, ary teny an-dalana, sosialy io lolo io, noho izany dia mila vonona ianao hizara azy amin'ny namana hafa ianao! Tsy hilefitra amin'ny fialonana amin'ireo izay tiany indrindra izy.
Raha ny famantarana ny Gemini dia mijoro ho an'ny hery mpanohitra, ny famantarana ny Libra dia maneho ny fifandanjan'ireo hery ireo. Noho izany, ny Sun Sign dia tsara indrindra hampiarahana an'i Gemini ary hiasa ho andry manohana ny fitoniana voalanjalon'ny olona teraka teo ambanin'ny marika Gemini. Ilay Aquarius mieritreritra mialoha sy mandroso dia mahatonga mpiara-miasa tsara ho an'ny Gemini satria i Aquarius dia iray izay mifehy ilay tantara, vaovao ary manavao:
Ny zavatra rehetra manintona ny Gemini Woman, ary ny Aries, miaraka amin'ny filàny zava-baovao sy ny hetsika, dia mety hahatonga ny mpiara-miasa lehibe, indrindra ao amin'ny departemanta adventurous. Manintona azy koa i Leos, farafaharatsiny aloha. Ny fisarihana dia noho ny aura tsy miankina amin'ireo teraka teo ambanin'ny famantarana. Saingy, ny fangatahana tsy tapaka ny sain'ny olona manana ny Leo dia mety hitarika amin'ny lalan'ny fialonana, ny tsy fifanarahana ary ny fahasimban'ny fifandraisana.
Na dia tsy voatery ho fifandonana aza dia tsy voatery hifanaraka tsara ny Kansera sy ny Gemini. Ny homamiadana dia mety ho mora tezitra, tsy afaka mivoaka amin'ny akorany. Na dia tsy voninkazo rindrina aza ny Gemini: ny finamanana tsara eny, fa ny fifandraisana mitarika amin'ny fitiavana amina fotoana maharitra dia tsy azo inoana. Virgo dia mety hifandona amin'ny Gemini Woman koa, indrindra rehefa mitaky be loatra na manandrana mamatotra azy haingana loatra.
Ilay Vehivavy Gemini izay mandehandeha, manana fahalalahana ary vonona hitety an'izao tontolo izao na mitaky fanovana tsy an-kijanona dia tsy combo amin'ny fifehezana sahirana an'i Scorpio. Mbola ratsy kokoa aza, ny Gemini Woman miova haingana dia mety haneho filana iray, zavatra iray, indray andro ary ny faniriana zavatra hafa amin'ny manaraka. Ny hetsika miova haingana dia mety ho toy ny baona ary mivadika ho mpiara-miasa notadiavin'i Scorpio.
Rehefa mividy fanomezana ho an'ny Gemini Woman, dia tsy hanana olana lehibe ianao amin'izany. Tiany ny mianatra ka anisan'ny fialam-boly tiany indrindra ny famakiana. Alao ho azy ny boky be mpividy indrindra amin'ny sokajy tiany indrindra na ampahafantaro azy ny karazana tsy dia mahazatra azy loatra izy; na izany na tsy izany, mahafaly azy ny manana boky hafa hiroboka ao aminy, ary azonao atao ny manintona azy amin'ny karazana vaovao aminy.
Ny fanomezana azy ho azy, fanomezana 'fotsiny satria' amin'ny fotoana rehetra amin'ny taona dia hanaporofo ireo fanomezana tsy hay hadinoina indrindra omenao azy. Raha mividy ilay fanomezana 'mahazatra' ianao amin'ny fotoana rehetra, ny fampifamadihana ny fomba fanoloranao ilay fanomezana sy ny fanaovana azy mahagaga amin'ny fomba sasany dia hahazo ny fony. Ohatra, fa tsy ny fanolorany taratasim-pitiavana azy fotsiny dia apetaho amin'ny familiana fiara. Na, atsofohy amin'ny balaonina somary mibontsina sy raozy lava vitsivitsy eo amin'ny fipetrahan'ny fiarany ora vitsy alohan'ny hifohany maraina. Jereo ny volony rehefa handeha hiditra ao anaty fiara izy handeha hiasa! Ataovy ho azy sy tsy ampoizina foana izany!
Ao amin'ny panteon romana dia misy an'i Janus andriamanitra manana tarehy roa. Ny tarehy iray dia mitodika miankavia, izay mifandray amin'ny lasa ary ny iray amin'ny ankavanana na amin'ny ho avy. Izy no andriamanitra mifehy ny fiafaran'ny herintaona sy ny fiandohan'ny taona hafa, fetra ary ny zavatra ho avy. Amin'izany fomba izany, ny vavy Gemini dia miresaka momba ny olona iray ihany koa izay mamaritra fetrany, mijery azy ireo ary manapaka azy ireo araka izay tiany. Gemini dia zodiaka izay mampifandray mora foana amin'ireo angano misy ny kambana. Ny famantarana, noho izany, dia midika zavatra mifandraika nefa mifanohitra: ny tantaran'ny tsy fitovizan'ny Castor sy Polydeuces, ary na ny tantaran'i Hercules sy Apollo aza dia mifandray amin'ity zodiaka ity.
Ity Sun Sign ity dia mety misy ifandraisany amin'ny tantaran'ny andriamanitra andriamanitra lanitra sy mpitondra ny olympika 12, Zeus, noho ny fahatahorany ny hery sy ny herin'ny olombelona, ​​dia nanapotika ny zavamananaina. Araka ny angano grika, ny olombelona dia olona tokana nisy loha roa sy rantsam-batana efatra. Ny tantara dia nitohy nanoritsoritra ny fomba nanirianay mandrakizay ny ho tafaraka amin'ny antsasany hafa. Ny tantara dia manandrana manazava ny fikarohantsika mandrakizay ny mpiara-mitory amintsika, ny mpiara-belona amintsika, na ny fahafenoantsika ao anaty.
Ao amin'ny Tarot, ny Lovers dia mifanitsy amin'ny mariky ny Gemini. Ao amin'ny tokotanin'ny Rider-Waite, i Adama sy i Eva dia mijoro eo amin'ny Saha Edena eo akaikin'ny Hazo Fahalalana ny Tsara sy ny Ratsy. Ny mpivady dia maneho ny herin'ny lahy sy ny vavy ary ny fomban'ny famantarana Gemini. Izy io koa dia maneho ny filana fahalalana fatratra izay fahita ao amin'ireo teraka ambanin'ity Sun Sign ity. Ny Sun Sign dia mifandraika amin'ny Devoly (rehefa misy heriny ratsy amin'ny hery), ary ny Suit of Swords ao amin'ny arcana kely.
Miaraka amin'ny mari-pamantarana Gemini mifandraika amin'ny Lovers in the Tarot, tsy misy mahagaga raha mifanitsy amin'i Anahata na ny Heart Chakra ihany koa ilay famantarana. Ny Sun Sign dia mifandraika amin'ny fihetsem-po amin'ny ambaratonga rehetra sy ny fara tampony. Ny isa dimy dia ny lafiny numerolojika Gemini. Ny isa dia maneho ny fitambaran'ny singa rehetra, ny fanahy ary ny Akasha: Izy io, noho izany, dia midika hoe fahamasinana.
Daty Gemini: 22 Mey - 20 Jona
Marika: Ny kambana
Glyph midika: Ny isa romana ho an'ny 'roa' sy ny glyph dia mampiseho tapa-kazo roa voafatotra mafy.
Sanskrit: Mithuna, midika hoe 'Ny Mpirafy.'
Andian-teny lehibe: 'Heveriko fa.'
Fitondrana anatomika: Ny soroka, ny havokavoka, ny tanana, ny taolana, ny fantsom-bokatra ary ny sandry
Anjely: Ilay arkanjely Raphael
Biby: Magpie, Squirrel, bibilava, soavaly, lolo ary alika
Dream Archetype: Ny Anima sy ny Animus, ny mpivady masina ary ny mpitia
Kalitao fandanjalanjana: Eritreritra lalina, fisaintsainana anaty, ary fihetsika
Vorona: Parrot, Finches ary Eagles
Vato fahaterahana: Voahangy, agata, Tourmaline ary Topaz.
Celtic Tree of the Month: Hawthorn (13 Mey – 9 Jona) ary Oak (10 Jona – 7 Jolay)
Hevitry ny Celtic Tree: Ilay Illusionist sy Ilay Mahery.
Chakra: Anahata na 'The Heart Chakra.'
Kambana Zodiac Sinoa: Soavaly
Mifanentana: Libra sy Aquarius
Detriment: Sagittarius na Pisces
pisces vehivavy eo am-pandriana miaraka amin'ny lehilahy virgo
Fanandratana ny planeta: Node Avaratra
Andriamanitra vehivavy: Artemis, Bast, Sekhmet, Isis sy Neftthys ary Freyja
Voninkazo: Lavender sy Lily an'ny lohasaha, Iris, Snap Dragon ary Orkide.
Miralenta: Masculine, Positive, Projective
Kristaly fanasitranana: Agate, Emerald, Tiger Eye, Peridot, Citrine, Aquamarine, Diamond, Jade, Islandy Spar, Onyx, Peridot, Topaz, ary Tourmaline
Herbs: Marjoram, Vervain, Lemon Verbena, Parsley, Volomaso, Lemon Grass, Fennel, Dill, Gladioli
Teny lakile: 'Fifandraisana' sy fanondroana ireo karazan-fifandraisana rehetra, ao anatin'izany ny fanoratana, ny fitenenana ary ny eritreritra.
Andriamanitra lahy: Apollo, Dionysus, Loki, Mercury, Janus, Castor and Pollux, and Hermes; koa, Zeus raha ny amin'ny fizarana ny iray ho roa.
Metal: Mercury / Quicksilver, Platinum ary Aluminium
Feo mozika: Fanalahidin'ny E.
Nomery Vibrations: 5
Menaka: Jasmine, Mastic, Orchid na sandalwood
Fiantraikan'ny planeta: Mercury
Loko Kilonga: Fotsy, mavo ary volomboasary
Loko faharoa: Manga manga, fotsy mena ary mavo
Ilaina voalohany: Fifandraisana sy fizarana fahalalana
Fofona: Wormwood, Sandalwood, Jasmine
Fikambanan'ny fizaran-taona: Lohataona
Fikambanana Tarot Card: The Lovers, The Devil (rehefa misy heriny ratsy amin'ny herin'ny hery), ary ny Suit of Swords ao amin'ny arcana kely.
Hazo: 'Ny anti-panahy ho Lady's Tree.'
Malaza: Angela Jolie, Naomi Campbell, Marilyn Monroe, Nicole Kidman, ary Natalie Portman.
inona ny planeta ao amin'ny rafi-masoandro
rahoviana no hiverina i comley halley